သံဓာတ်က ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သံဓာတ်က ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ?
?သံဓာတ်က ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ?
ကလေးတွေမှာ ဘာလို့ သံဓာတ်ပိုလိုအပ်တာလဲ? သံဓာတ်ပြည့်ဝရင် Iron Man ကြီးဖြစ်သွားမှာမို့လား။ အဲ့လိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝလွန်စွမ်းအားရှင်ကြီး ဖြစ်မှာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဘဝလမ်းခရီးကို ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းအပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်ဖို့တော့ သံဓာတ်အားနည်းနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် သံဓာတ်လိုအပ်သလို ကိုယ်ခံစွမ်းအားအမြဲပြည့်ဝနေဖို့လည်း သံဓာတ်ပြည့်ဝဖို့လိုပါတယ်။
?သံဓာတ်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်ကရလဲ ??
Iron လို့ခေါ်တဲ့ သံဓာတ်ဆိုတာ လူ၊ သစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန် စတဲ့ သက်ရှိတွေအတွက် မရှိမဖြစ် ပါဝင်တဲ့ သတ္ထုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအားဖြင့်
– အသည်း၊ အသား၊ ငါး၊ ပုဇွန် အမျိုးမျိုး
– ပဲအမျိုးမျိုး၊ တို့ဟူး
– အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမျိုးမျိုး
-သံဓာတ်အားဖြည့် (Irofortified)လုပ်ထားတဲ့ အစေ့အနှံ Cereals ၊ ပေါင်မုန့်နဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေ
?လူတွေမှာ ဘာလို့ သံဓာတ်မရှိမဖြစ်တာလဲ ??
လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ ကောင်းမွန်စွာ မမောမပန်း သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ အောက်စီဂျင်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအဆုတ်ကရှူသွင်းလိုက်တဲ့ အောက်စီဂျင်ကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို သယ်ပို့ပေးတာကတော့ သွေးနီဥတွေပေါ့။ ဒီသွေးနီဥတွေမှာ အောက်စီဂျင်ခိုနားပြီး သယ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ Hemoglobin လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ဟေမိုဂလိုဘင် ဖြစ်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကတော့ မိတ်ဆွေကောင်းကြီး “သံဓာတ်”ပဲပေါ့။ ဒီတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သံဓာတ်အားနည်းလာရင် သွေးအားပါနည်းလာပြီး မောပန်းနွမ်းနယ် အသက်ရှူမဝတာကတစ်ဆင့် သိပ်ဆိုးလာရင် နှလုံးမှာ Haemic Murmur ဆိုတဲ့ နှလုံးခုန်သံမမှန်တာတွေ နှလုံးခုန်မြန်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Anemic Heart Failure ဆိုတဲ့ နှလုံးရောဂါအဆင့်ဖြစ်သွားရင်တော့ နှလုံးပျက်စီးပြီး အသက်အန္တရာယ်ပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
?ကလေးတွေမှာ သံဓာတ်ဘယ်လောက်ပမာဏ လိုအပ်လဲ ??
မိခင်နို့အပြည့်အဝသောက်နေရတဲ့ ကလေးတွေအတွက် သံဓာတ်ထပ်အားဖြည့်ပေးဖို့ မလိုတတ်ပါဘူး။ အမေအစားမရှောင်ဘဲ အာဟာရပြည့်အောင်စားပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။
▪ခုနစ်လ မှ တစ်နှစ်အထိ
ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးတဲ့ အချိန်ကစပြီး သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသည်း၊အသား၊ပဲ၊အသီးအရွက် စတာတွေကို စုံလင်မျှတအောင်ကျွေးပေးရပါမယ်။ တစ်နေ့ကို သံဓာတ် 11mg လိုအပ်ပါတယ်။
▪တစ်နှစ် မှ သုံးနှစ်အထိ
နို့သောက်တာလျော့သွားတဲ့ အရွယ်ဖြစ်လို့ အစာမှာပိုဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ တစ်နေ့စာ လိုအပ်ချက် 7mg ဖြစ်ပါတယ်။
▪လေးနှစ် မှ ရှစ်နှစ်အထိ
▪ကိုးနှစ်မှ ဆယ့်သုံးနှစ် အထိ
တစ်နေ့စာ 8 mg လိုအပ်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေအတွက် နေ့စဉ် 11mg လိုအပ်ပြီး မိန်းကလေးတွေကတော့ နေ့စဉ်15mg ရဖို့လိုပါတယ်။ လစဉ်ရာသီသွေးဆုံးရှုံးမှုကြောင့် သွေးအားနည်းတာ အဖြစ်အများဆုံး အရွယ်လည်း ဖြစ်လို့ပါ။
အချုပ်ဆိုရရင်တော့ သံဓာတ်ပြည့်ဝနေရင် တော်ရုံရောဂါတွေကို မှုစရာမလိုပဲ ရင်ဆိုင်ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။ ကောင်းကောင်း ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို အားကောင်းစေဖို့အတွက် Vitamin C လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။